🥇 ▷ - Galaxy Samsung Galaxy M30s oo leh 48MP kamarado ah ayaa imaan doona bisha Sebtember »- ✅
– Galaxy Samsung Galaxy M30s oo leh 48MP kamarado ah ayaa imaan doona bisha Sebtember »-
Samsung wuxuu ku shaqeynayaa noocyada awoodda of your line Galaxy To iyo Galaxy M waxaa la soo bandhigay inta lagu gudajiray qeybtii koowaad ee sanadkan 2019. Mid ka mid ah aaladaha uu soo saaraha Kuuriyada soo diyaarinayo Waxay ku saabsan tahay Galaxy M30s. Sida magacu u muuqdo, waxay noqon doontaa nooca iyadoo la sii hagaajinayo Galaxy M30 oo lagu dhawaaqay horaantii sanadkan. Waxaa la qiyaasayaa in casriga Si dhakhso leh ayaan uga doodi doonaa. Sida laga soo xigtay IANS, shirkadda Kuuriyada Koonfureed ayaa sida ugu dhakhsaha badan u bilaabi doonta sida bisha soo socota waana la imaan doonaa a 48 MP qaabeynta saddex-geesoodka ah.
Galaxy M30s oo leh kamarad 48MP saddex-laab ah
Warbixinta ayaa lagu sheegay 48MP lens ayaa noqon doona dareeraha ugu weyn Nidaamka kamaradaha saddex-geesoodka ah ee Galaxy M30s Waxa kale oo uu shaaca ka qaaday in Galaxy M30-yada ay awoodayn doonto processor cusub Exynos oo Samsung aysan isticmaalin ilaa hada taxanaheedii M ee casriga. Iyadoo aan la sheegin cabirka saxda ah ee batterigiisa, wuxuu cadeeyay in Galaxy M30 uu la imaan doono a warshadaha horseed u ah awoodda bateriga. Wuxuu sidoo kale faallo ka bixinayaa inuu heli doono taageero tikniyoolajiyada si dhakhso leh u dallaca.
Illaa iyo hada, daadad hore ayaa shaaca ka qaaday in Galaxy M30s uu ku shaqeyn doono Exynos 9610 chipset. Intaa waxaa dheer, waxaa lagu qalabeyn karaa a baytar weyn ilaa 6,000 mAh awood. Waad ku sii wadan kartaa qaabeynta shaashadda leh uruursanaanta ‘Infinity-V’. Ma jiro wax macluumaad ah oo laga heli karo dareemayaasha kale ee kaamirada ee Galaxy M30s Intaas waxaa sii dheer, lama oga in 48MP sensor-ka ugu weyn uu noqon doono Samsung Bright ISOCELL GM1 ama nooca la xoojiyay ee loo yaqaan GM2 oo lagu soo bandhigay 64MP GW1.
Telefoonka waxaa la filayaa inuu ku yimaado qalab a jirka polycarbonate leh dhammaystiran oo dhalaalaysan. Sawirro la soo sifeeyay oo ku saabsan kiiska aaladda oo ka soo muuqday bilihii la soo dhaafay ayaa shaaca ka qaaday in la qalabeyn doono deked USB-C ah iyo jaakad maqal ah oo 3.5mm ah. Waxaa la filayaa inuu yimaado noocyo kala duwan oo ah midab madow, caddaan iyo buluug.
Tafaasiisha Samsung iyo astaamaha Galaxy M30
Galaxy M30 wuxuu soo bandhigayaa shaashad 6.4 inji S-AMOLED leh feejignaan. Waxay taageertaa qaraarka HD buuxa + Hawlaheeda waxaa sii wanaajiya chipset Exynos 7904. Waa la isku daray 4 GB ama 6 GB oo xusuusta ah RAM. Telefoonku wuxuu la imanayaa xulashooyinka kaydinta gudaha ee 64 GB iyo 128 GB.
Taleefanka gadaashiisa ayaa leh a dejinta kamaradaha saddex-gees ah. Tan waxaa ku jira lens weyn ee 13 Xildhibaan, lens xagal aad u ballaaran oo ah 5 MP iyo dareeme qoto dheer oo ah 5 MP. Waxay leedahay kamarad hore oo ah 16 MP. Telefoonka waxaa taageeraya batar weyn oo 5,000 oo mAh ah oo taageera 15W soon.
48 mp48mp camera muuqaalada faahfaahinta galaxy m30 galaxy m30sm30ss samsung samsung Galaxy M30